के भयो फेरी गौरी मल्ललाई ? – Gazabkonews
चलचित्रमा राम्रो छबि बनाएकी बरिष्ठ अभिनेत्री गौरी मल्ल रहेछिन पा पै पा पले भरिएकी, यि महिलालाई सौ तेनी ब्य बहा र गर्दै घरबाट नि कालेको दृश्य सामाजिक संजालमा भाइरल, कसरी यस्तो गर्न सकेकी यत्रो नाम र दाम कमाएकी गौरीले ?
दोस्रो बजारमा किनबेच हुने सबै शेयर धितोमा, जेठमा शेयर धितो राख्ने १० प्रतिशतले बढे, कति छन् शेयर धितो राख्ने लगानीकर्ता ?दोस्रो बजारमा किनबेच हुने सबै शेयर धितोमा जाने गरेको देखिएको छ। केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली (सिडिएससि)ले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार दोस्रो बजारमा कारोबार हुने सबै शेयर धितोमा जाने गरेको देखिएको हो।
दोस्रो बजारमा शेयर धितो राखेर ऋण लिने लगानीकर्ता १० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको सिडिएससीले जनाएको छ। जेठ मसान्त सम्म ५२ करोड ३१ लाख ३७ हजार तीन सय कित्ता शेयर धितोमा रहेको सिडिएससिले जनाएको छ। जुन सूचिकृत शेयरको तुलनामा धितोमा जाने शेयर सङ्ख्या ८.९८ प्रतिशत छ। किनकि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)मा जेठ मसान्तसम्म २१९ कम्पनीका पाँच अर्ब ८२ करोड २२ लाख ११ हजार कित्ता शेयर सूचिकृत छन्।
नेप्सेले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक रिपोर्टमा उक्त वर्ष दोस्रो बजारमा जम्मा ८.८७ प्रतिशत शेयर मात्रै कारोबारका लागि आएका उल्लेख छ। उक्त वर्ष नेप्सेमा कुल चार अर्ब ८२ करोड ७५ लाख ८१ हजार ५८० कित्ता सूचीकृत थिए। सोही वर्ष दोस्रो बजारमा कुल सूचिकृत शेयर मध्ये ४२ करोड ८५ लाख २२ हजार ४० कित्ता शेयर किनबेच भएका हुन्। जुन ८.८७ प्रतिशत हो।
यस आधारमा पनि कारोबारमा आउने शेयर सङ्ख्या र धितोमा जाने शेयर बराबरी जस्तो देखिएको हो। यस आधारमा पनि दोस्रो बजारमा आउने सबै जसो शेयर धितोमा जाने गरेका हुन्।
दोस्रो बजारमा आउने सबै जसो शेयर धितोमा जाने गरेको देखिए पनि कुल सूचिकृत शेयरको तुलनामा भने धितोमा जाने शेयरको सङ्ख्या निक्कै कम देखिन्छ। तर सूचिकृत शेयरको तुलनामा धितोमा आउने शेयरको सङ्ख्या १० प्रतिशतको हाराहारीमा हुनु नेपालको लागि पर्याप्त रहेको सिडिएससिको भनाई छ। दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने लगानीकर्ता नै कम भएको कारण धितोमा जने शेयरको सङ्ख्या बढी नभएको हो। जति जति दोस्रो बजारमा लगानीकर्ता बढ्दै जान्छन् त्यति त्यति धितोमा जाने शेयरको सङ्ख्या बढ्दै जाने गरेको सिडिएससिको भनाई छ।
सिडिएससिका अनुसार गत चैतमा ४५ करोड ३७ लाख ५८ हजार तीन सय ९४ कित्ता शेयर धितोमा रहेको थियो। असारमा उक्त शेयरको सङ्ख्या ५२ करोड ३१ लाख ३७ हजार तीन सय कित्ता पुगेको छ। चैतको तुलनामा ६ करोड ९३ लाख ७८ हजार नौ सय ६ कित्ता बढी हो। जुन चैतको तुलनामा १५.२८ प्रतिशतले धितोमा जने शेयरको सङ्ख्या बढेको छ।
गत वर्ष चालु वर्षको शेयर कारोबारमा व्यापक वृद्धि हुँदा धितोमा जने शेयरको संख्या पनि उल्लेख्य वृद्धि हुँदै जान थालेको हो। धितोमा जने शेयरको मात्रै वृद्धि भएको छैन शेयर धितोमा राख्ने लगानीकर्ता समेत करिब १० प्रतिशतले बढेका छन्। सिडिएससिका अनुसार गत चैत मसान्त सम्म एक लाख ५४ हजार दुई सय ५५ जनाले शेयर धितोमा राखेका थिए। असार मसान्त सम्म उक्त सङ्ख्या बढेर एक लाख ६९ हजार तीन सय ५९ पुगेको छ। गत चैतको तुलनामा शेयर धितोमा राख्ने मानिसहरू १५ हजार एक सय चार जनाले बढेका हुन्। जुन तीन महिना अघिको तुलनामा ९.७९ प्रतिशत बढी हो।
पछिल्लो समय दोस्रो बजार बढ्दै जाँदा लगानीकर्ताको मनोबल बढेको छ। मनोबल बढेकै कारण लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा लगानी समेत बढाएका छन्। लगानीकर्ताले शेयर धितो राखेर दोस्रो बजारमा थप लगानी गर्ने क्रम बढेको छ। जसले गर्दा तीन महिना मै शेयर धितो राख्ने लगानीकर्तामा १० प्रतिशतको हाराहारीमा बढेको सिडिएससिको भनाई छ।
केही लगानीकर्ताले बन्दा बन्दीको अवस्थामा खर्च चलाउन र व्यापार बचाउन समेत आफूसित भएको शेयर धितोमा राख्ने क्रम बढेको छ। धेरै लगानीकर्ताले शेयर धितो राखेर बैक व्याज लगायत घरायसी व्यवहार चलाउन थालेकाले पनि शेयर धितोमा जाने शेयरको सङ्ख्या बढ्दै गएको एक बैंकका कर्मचारीले बताए।
यस आधारमा पनि दोस्रो बजारमा कारोबारमा आउने सबै जसो शेयर धितोमा जाने गरेको छ भने केहीले मात्रै शेयर धितो राखेको पैसा अन्यत्र उपयोग गर्ने गरेका छन्। जति जति दोस्रो बजारमा कारोबारमा आउने शेयरको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ त्यति त्यति धितोमा जने शेयरको सङ्ख्या पनि क्रमिक रुपमा बढ्दै जाने गरेको छ।